Ngokuthakazelisayo, uma ubuza umbuzo "Kuyini umsunguli we edumile", ngubani wawuyosibheka ezinjalo? Phela, zonke emlandweni wesintu uyazi geniuses eziningi, ovelele okutholakele kokuvamile kwezesayensi ukudalwa amadivayisi anobuciko ezihambisa ezimpilweni zethu nawe. Ezifika engqondweni igama Einstein, Newton, Tesla. Nokho, ngaphandle kokubandlululwa kokufaneleka nomnikelo lezi izingqondo Basaba bekusebenza phezu kuvisisa kwemithetho yemvelo yomhlaba kanye izakhiwo eyisisekelo yonke. Ukukhuluma ngendlela umsunguli edume kunazo, ngokuvamile kufanele engqondweni labo wadala zigcwele emhlabeni namuhla, kodwa evula ngesikhathi sako, amadivayisi yakhelwe ukukhonza kwethu ekuphileni kwethu kwansuku zonke nawe. Ngokwesibonelo, ingilazi yesibani, ipeni obungangenhloko kakhanjana, lo mshini ilokhi emnyango, kanye nezinye izinto eziningi ezincane ngaphandle esingakwazi ukucabanga ezimpilweni zabo. Yiqiniso, kunzima ukuphendula ngokungananazi ukuthi umsunguli edume kunazo emlandweni ukudalwa ezobuchwepheshe. Nokho, siqokomisa amagama Ukushaywa kakhulu.
Futhi, mhlawumbe kakhulu umsunguli abadumile. Futhi nje kuphela azenza. Kuyindida, kungasiko yibo. Wonke umuntu uyazi ubuhlakani uLeonardo da Vinci sika njengoba umdwebi, nombhali Mona Lisa kanye Madonna, umqophi wemifanekiso wayecabangisisa. Nokho, akubona bonke is uLeonardo umsunguli ezaziwayo. Kodwa anakho le bakudala kakhulu ukwakhiwa mechanical ethangini lokuqala, ibhayisikili, parachute ngisho irobhothi. Lesi sakamuva kwaba indlela ngensimbi zempi knightly futhi kubangela zempi ukwenza ukunyakaza zabo, esivela indoda. Ngeshwa noma ngenhlanhla, iningi nocwaningo lwakhe kude ngaphambi kwesikhathi sakhe, ngakho-ke akazange asilethe ethile value added ngesikhathi impilo usosayensi othile.
Mhlawumbe, lena American kule ezikhathini zanamuhla umsunguli edume kunazo zonke. amadivaysi 100 noma isebenziseke kakhulu bayindlala umphakathi ojwayelekile, zembula lukhulu ngempela. Esikhathini esiningi womsebenzi walo engxenyeni kwekhulu XIX yesibili. Ukugcina ijubane ngentuthuko ka zesayensi theory ke kokucabanga izisekelo, ezifana wokushintsha kwamandla nokwakheka kwezinto kanye quantum Mechanics, uThomas Edison lobunikazi igilamafoni, kinescope, amalahle esikhipha isibani, umbhobho ngocingo. Futhi lokhu kumane nje kuyingxenye yomthwalo ezisunguliwe yakhe edumile.
Futhi iyini umsunguli edume kunazo zonke emhlabeni Slavic?
Qamba Ivana Petrovicha Kulibina ezaziwayo, cishe, ngamunye compatriot yethu. Njengoba bevela emndenini ongaswele lutho wayesemathuneni ebusheni bakhe wabonisa ikhono elimangalisayo lokuqamba Mechanics. Futhi ukuphila kwakhe konke ukudala ezintsha ku-Russia phakathi kwezinsimbi zomculo XVII ekhulwini olwandle, amanzi oyibamba izinjini, ephaketheni iwashi nge iwashi, ukudlala izingoma ezahlukene.
Yiqiniso, laba bantu abathathu, naphezu kwamandla onke lokusungula kanye nomklamo emakhono abo, lokhu nenqwaba akukwazi elinganiselwe. Njengoba baziwa emhlabeni Genri Forda igama, Mikhail Kalashnikov, Aleksandra Popova, uRudolf Udizili, uJacques Cousteau kanye nabaningi abanye.
Kuyini isithende le Achilles '
Abantu bakudala. abantu sidilizwa: ukukhula, ukubukeka, amakhono ayisisekelo kanye umsebenzi
Henry Winkler. Movie "Wena Ungavuli Mess ne Zohan," "Izinsuku Happy"
Abaningi uswidi ozithandayo - amagilebhisi. Calorie futhi izakhiwo ewusizo.
Indlela ukupheka anyanisi nekharameli ekhaya
Amafomu ezandla. Isihlangu somzimba. Ukwakhiwa kwejazi lezingalo
Ulimi Literary - kungcono ... Umlando isiRashiya etemibhalo
Juniper: zitshala ekwindla, betshala futhi anakekele endle, ukukhiqizwa kabusha
Muzheterapiya ngaphambi kokubeletha: Uhlolojikelele, izici nekghono